'स्वास्थ्य, शिक्षालाई बजारको हातमा दिनेहरुले गाेविन्द केसीको आन्दोलनलाई मसला बनाउन सुहाउँछ ?'
रामकुमारी झाँक्री, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा बुधबार, साउन २, २०७५ मा प्रकाशित
रामकुमारी झाँक्रीको एउटा तस्वीर निकै चर्चित भयो शाही शासनकालमा प्रहरी टाउको फुटाउँदा रक्ताम्य भएको । जुझारु विद्यार्थी नेता झाँक्री अखिलको अध्यक्ष भइन्, प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा खरो उत्रिइन् । टाउको फुटाइन्, रगत बगाइन् र अहिले नेकपाबाट सांसद छिन् । भन्छिन्–सरकारका कदम मन परेको छैन, व्यवस्था, संविधान मन परेको छैन भने सिंहदरवार भत्काउन गए हुन्छ, टाउको फुटाउन हिँडे पनि हुन्छ, नत्र नियम मान्नुपर्छ । गोविन्द केसीको आन्दोलन, सरकारले गति लिन नसकेको नागकि अनुभूति, पार्टी एकतापछिको अवस्था आदीको सेरोफेरोमा रहेर जनतापाटीका कृष्ण गिरीले उनीसँग संवाद गरेका छन् ।
देशमा ‘कम्युनिस्ट’ सरकार छ, तर सरकारमाथि जनताको आवश्यकतामा ध्यान दिने भन्दा पनि हावादारी गफ गरेर बसेको आरोप लागेको छ । त्यही पार्टीको सांसद, नेता तपाईलाई के लाग्छ यस बारेमा ?
विकासका कुरा, सपनाका कुरालाई हावादारी गफ भन्नु भनेको मानिसको चिन्तनसँग जोडिन्छ । हामीले सपनाका कुरा भनेको राति सुतेको समयमा देखेको सपना होइन । सपना ती हुन जसले सुत्न दिदैन ।
हो अहिलेका सपना, विकासका योजना समय सन्र्दभमा नाप्नु पर्छ । अथवा कति सार्थक गर्न सकिन्छ कति सकिंदैन भनेर हो बहस हुनुपर्ने । नाप्न सकिने र समय सिमामा पुरा गर्न सक्ने सपनाले सुत्न दिँदैन । सुरु सुरुमा भिजन अथवा सपना यसरी नै आउने हो । यी सपनालाई हावादारी भन्नु भन्दा पनि यसको कार्यन्वयनमा जोड दिनु पर्छ ।
सपना आफैंमा गलत होइन । तर यी सपना देख्दै गर्दा दैनिक जिवनमा आउने समस्याहरुमाथि नजर अन्दाज गर्नु पर्छ भन्ने छैन । पाँच बर्ष,एक बर्ष र ६ महिनामा के गर्ने भन्ने योजना बनाउनु पर्छ । ती योजना अनुसार नै काम गर्नु पर्छ । अहिलेको आवश्यकता के हो भनेर छनौट गर्नु पर्छ । जनताको प्राथमिकता कुन कुन कुरामा छ भनेर पहिचान हुन आवश्यक छ ।
म पनि सडकमै हिँड्छु । सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्छु । जनताका आवश्यकताहरु माथि यो सरकारले ध्यान दिएन भन्ने नै छ । उदाहरणको लागि काठमाडौंमा पछिल्लो केही हप्ता देखि फोर उठेको छैन । यो उठाउन के प्रधानमन्त्रीले सरकारमाा बोल्नु पर्छ र ? पर्दैन । तर स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक छ । काठमाडौंको फोहर उठाउन स्थानीय तहले नै पहल गर्ने हो । सफाइ गर्न महानगरपालिकाले पहल लिए पूरा हुन्छ । तर भक्तपुरमा ओली सरकार आएर डुवान भएको होइन । हाम्रो गलत नीति, भूमाफिया लगायतको कारण भएको हो । यो दैनिक समस्याको कुरा हो । यो पटक अब म संसदमा यो कुरा उठाउँछु । २०३२ सालबाट ज–जसले सरकारी जमिन अथवा सार्वजनिक जमिन आफ्नो नाममा गरेका छन् यो सबै छानबिन हुनु पर्छ । यसमा कुरा उठाउन आवश्यक भएको छ ।
फोहोरमैला अस्थायी कुरा हो । यसको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । यसको समुचित व्यवस्थापन ठूलो कुरा हो । काठमाडौंमा खाल्डा खुल्डी टाल्नु र फोहरको दिर्घकालीन व्यवस्थापन हुनुपर्छ । यस्तै साना–साना कुराले सरकारमाथि कुरा उठ्छ ।
यो सरकार रेल र पानी जहाजका कुरा धेरै कुरा गर्छ । सिटामोलका, दैनिक जीवनमा आवश्यक कुराहरु गर्दैन, यसले आवश्यक कुरालाई पुरा गर्नु भन्दा आवश्यक मुद्धालाई डाइर्भर्ट गर्दै छ भन्ने जनगुनासो धेरै छ नि ?
दैनिक जीवनका काम पूरा गर्ने काम कुन सरकारको हो त्यो ध्यान दिनुपर्छ । यो देशमा तीन तहका सरकार छन् । यसमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ । विशेषत केन्द्र सरकारले ठूला योजना, ठूला कामलाई नै पहिला प्राथमिकतामा राख्छ नै । रेल, तेल, पानीजहाज, पाँच हजार मेघावाट, दश हजार मेघावाट विद्युत उत्पान गर्ने कुरा नै गर्ने हो केन्द्रीय सरकारले । तत्कालका समस्या स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्ने हो । मौद्धिक नीति ल्याउने । सरकार कता जाँदै छ, कस्तो हुँदै छ भनेर बौद्धिक व्यक्तित्वहरुले र आम जनताले पनि हेर्ने र भन्ने कुरा हो । ७ सय ५३ स्थानीय सरकार सक्रिय हुन आवश्यक छ ।
स्थानीय र प्रदेश सरकार छ, यी दुबै तहमा पनि नेकपाको बहुमत छ । यसरी हेर्दा जहाँ पनि नेकपा पार्टी सरकार संचालनमा चुक्दै छ नि होइन ?
यो प्रश्न गम्भीर हो । पार्टी विचार, सिद्धान्त, भिजन, दर्शन अुनसार चल्छ । सरकारले पार्टी होइन पार्टीले सरकार चलाउने हो ।
पार्टीले बोकेको दर्शन भिजन विचार अुनसार जनताबाट अनुमोदित भएर सरकारमा आउने हो । र, सरकारबाट ती सबै कुरा लागु गर्ने हो ।
कुनै पनि सरकार विचार, सिद्धान्त भिजन भएको पार्टीले संचालन गर्छ । उसले संचालन गर्ने सरकारसंग भिजन हुनुपर्छ । उसले आफ्नो घोषणपत्र, विचार र सिद्धान्त अनुसार चल्छ । सरकार पनि पार्टी अन्र्तगत चल्छ । पार्टीले ल्याएको भिजन जनतामा लागु गर्ने हो । स्थानीय तहमा पनि नेकपाको बहुमत छ । सात वटा प्रदेश मध्य ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ ।
अब हामी यो यस्तो कारणले काम गर्न सकेनौं भनेर पन्छन पाउने । यो सरकार अथवा तीनै तहका सरकारले जनताको पक्षमा गर्नु नै पर्छ । यदि गरेन भने यसको भविष्य नै अन्यौल हुन्छ ।
यो सरकारले गर र मरको अवस्थामा काम गर्नुपर्छ । यो गर्ने भनेको केन्द्रका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमात्र होइन, स्थानीय तहको प्रमुख पनि प्रधानमन्त्री जस्तै शक्तिशाली छ । प्रदेशले पनि काम गर्नुपर्छ । अब केन्द्रतर्फ मुख ताकेर दिएन भएन भनेर भन्ने होइन । आफुले गर्नुपर्ने काम गर्ने हो । यो भनेको जनतासँग हामीले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने हो । तर पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि गर्नुपर्ने कामहरु गर्न सकेको छैन । गरेको छैन ।
अर्को हामी पार्टी एकताले दोहोरो सक्रंमणबाट गुज्रदै छौं । यसले पनि धेरै समस्या आएको छ । ढिलो भएको छ । केन्द्रीय समिति बाहकम अन्य समिति बनेका छैनन् । पार्टीका सबै कमिटीहरुको एकता पूरा भएको छैन । पार्टीका सबै नेतृत्वहरु सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ । तर पनि ढिलो भएकाले मानिसहरु निरास भएका छन् । यसैमा अरुहरुले खेल्ने ठाउँ पाएका छन् ।
पार्टी एकताले पनि काम गर्न सकिएन भन्नुभयो, के स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा चुनिएर आएका मानिसहरु कम्युनिस्ट कार्यकर्ता होइनन् र ? हुन् भने किन उनीहरुले आफ्नो पार्टीका घोषणापत्र, भिजन अनुसार काम गरेका छैनन् ?
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो काम गर्नुपर्ने हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले के काम गर्ने भन्ने अहिलेसम्म थाह नपाए जस्तो छ । नगर सभा भनेको केन्द्रको सभा जस्तै हो । तर त्यहाँ लावालस्कर प्रमुख अतिथि, अतिथि बनाएर गरि राख्नु भएको छ । यो गर्ने होइन । मेयर र अध्यक्ष नै त्यहाँ सभामुख हो, प्रधानमन्त्री जस्तो हो । यसमा उहाँहरुको मात्र दोष होइन, हाम्रा नेताहरु नै प्रमुख अतिथि हुन जान्छन् । यसबारेमा सोच्नुपर्छ । जब कि स्थानीय तह पनि त सरकार हो । संसद हो । पहिलो बर्ष त गरे गरे यो बर्ष पनि गरे । अर्को केन्द्र र प्रदेशमा संसद संचालनको लागि धेरै कर्मचारी, मर्यादापालक पठायो तर ती स्थानीय तहमा केही पनि पठाएन । संसद सचिवालयमा कर्मचारी पठायो । केन्द्र र प्रदेश सुगममा छन् । स्थानीय तह गाउँ दूरदराजमा पनि छन् ।
अहिलेसम्म पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार नै बुझेको छैन । जब कि यो महानगरपालिका प्रदेश सरकार भन्दा शक्तिशाली र प्रभावशाली छ । यसले पनि गाउँ दूरदराजका स्थानीय तहको जस्तो काम गरि रहेको छ ।
सरकारका कामकारबाहको आलोचना बढेको छ, जस्तो गोविन्द केसी, संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति र गंगामायाको बारेमा उदासीन भएको भन्ने आरोप छ नि ?
गंगामाया यो सरकारको उपज होइन । गोविन्द केसी पनि यो सरकारको उपज होइन । अहिले आएर यो सरकारसँग ठोकाइएका हुन् । यो सरकारलाई डाम्न प्रयोग भएका मुद्धा हुन् ।
अर्को कुरा राजधानी लगायतका विभिन्न ठाउँमा प्रर्दशनको रोकका बारेमा । सरकारले आफ्ना नागरिकको दैनिक समस्याको समाधान गर्छ । कानुनमा जे जे व्यवस्था छ त्यो जो कसैले पनि मान्नु नै पर्छ । म सांसद हुँ । अझ संसद चलिरहेको समयमा विदेश जाँदा मेरो दल, सभामुख र राज्यसंग अनुमति लिनुपर्छ । त्यो पनि ड्यु प्रोशेसमा अनुमति लिनुपर्छ । उपकुलपतिको बारेमा पनि यही भएको हो । उहाँले अनुमति नलिएर विदेश जान थाल्नु भएको हो । उहाँलाई स्वीकृति दिने संस्था शिक्षा मन्त्रालय हो । उहाँले फोनमा भनेर हुँदैन थियो । प्रक्रिया पुरा गरेर जाने हो । यदि कानून नमानेर जानु भयो सरकारले रोक लगाएको हो । हामीले पंचायतकालमा आन्दोलन गरेर प्रहरीलाई शैक्षिक संस्थामा प्रवेश गर्न रोक लगाएका थियौं । तर स्ववियु निर्वाचनमा मतपेटिको सुरक्षाको लागि प्रहरीलाई शैक्षिक संस्थाभित्र प्रवेश गरायाैं । यो समय अनुसार फरक फरक हुन्छ । हाम्रो विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक व्यक्ति कति अव्यवसायी छन् भन्ने उदाहरण पनि हो यो । आफुले के गर्नु हुन्छ र हुँदैन भन्ने पनि थाहा नपाएका अथवा पाएर पनि कानून मिच्दै जाने प्रबृत्तिले यो समस्या ल्याएको हो ।
कहाँ कहाँ प्रर्दशन गर्ने र कहाँ नगर्ने भन्ने नियम बनाउन सक्छ । बनाउँछ । आन्दोलनको समयमा माइतीघर, नयाँबानेश्वर, रत्नपार्क, बागबजार, घण्टाघर, न्युरोड लगायतका धेरै ठाउँ निषेधित क्षेत्र घोषणा भएका थिए । हामीले परिवर्तनको लागि ती सबै निषेधित क्षेत्रको उलंघन गदै आएका हौं । अहिले त यो क्षेत्रमा प्रर्दशन गर भनेको छ ।
राज्यले आफ्ना नियम कानून लागु गराउँछ नै । कांग्रेसका साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु,–तपाईहरुले यो कानून फेर्छु, संविधान फेर्छु, कानून मान्दिन, संविधान मान्दिन भन्ने हो भने माइतीघरमा मात्र होइन, सिंहदरबारको गेट भत्काउने लक्ष्य राख्नु होस । हरेक ठाउँका निषेधज्ञा तोड्नु होस । सिंहदरबारको गेट भत्काउने साहस गर्नुहोस् ।
हिजो मैले सडकमा हुँदा त्यो समयका नियम, कानून तोड्न संविधान नमान्न हिँडेकी हुँ । राज्यव्यवस्था मान्दिन भनेर सडकमा हिडेकी हुँ । आफु अनुकुल फेर्छु भन्दै हिडेका हांै । निषेधाज्ञा तोड्दै हिँडेको हुँ ।
निषेधाज्ञा जारी भएको ठाउँमा प्रर्दशन गरे राज्यले त बल प्रयोग गर्छ गर्छ नै । बल प्रयोग गर्दा टाउको फुट्छ त । हामीहरुले पनि धेरै पटक टाउको फुटाइ पाएका हौ । यो के कसैको घर भात खान जाँदा फुटाएको हो त । होइन नि । राज्य सत्ताको विरोध गर्दा हो । विरोध गर्दा टाउको फुटाइ पाइन्छ, हातखुट्टा भाँचिन्छन् यो सबै मलाई थाहा थियो ।
निषेध गरेको ठाउँमा प्रर्दशन गर्दा प्रहरीले सलाम ठोक्दैन । उसले बल प्रयोग नै गर्ने हो । होइन तपाई यो राज्यका कानून, संविधान परिवर्त गर्छु भन्नुहुन्छ भने तपाई पनि बल प्रयोग गर्नुहोस, राज्यले पनि बल प्रयोग गर्छ । माइतीघरमा प्रर्दशन गर्दा राज्यलाई असुविधा भएर हो । धेरै मेहनत गरेर मण्डला बनाएको हो । सिंहदरबार नजिक छ । संवेदनशील ठाउँ हो । गौशाला गर्न ठाउँ दिएको छ ।
दिल्लीमा जंन्तरमन्तरमा दिएको छ । चीनमा तियानमियान स्क्वायरमा प्रर्दशन गर भन्छ । अमेरिकामा टाइम्स स्क्वायरमा गर्न दिँदैन । दिल्लीको इण्डिया गेटमा प्रर्दशन गर्न दिँदैन । बल प्रयोग गर्छ । अमेरिकामा वालस्ट्रिटमा गर्छन् ।
विश्वको सरकारले सार्वभौम संविधान लागु गर्छ । कानून कार्यन्वयन गराउँछ नै । यदि संविधान र कानून कार्यन्वयन गर्न सकेन भने पो असफल भयो भन्न सकिन्छ । यदि नियम कानून लागु गराउँछ । संविधान कार्यन्वयन गराउँछ भने यो सरकार सफल हो ।
भनेपछि यो सरकार अधिनायकवाद तर्फ उन्मुख छैन ?
यो अधिनायकवादको त गफै हो । प्रमाण सहित आउनुपर्छ । जनमतबाट आएको छ सरकार । राज्यका तीन वटा अंगको सन्तुलनबाट आएको । मानवअधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघको पक्ष राष्ट्र भएको सरकार अधिनायकवाद हुन्छ भन्नु हावादारी कुरा हो । गफ मात्र हो । नेकपा उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक पार्टी हो ।
त्यसो भए यो सरकार अहिले सही तरिकाले चलिरहेको छ ?
हो, म त अझ भन्छु सरकारले आफ्ना नियम कानून कार्यन्वयन गराउन कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । सिन्डिकेटको कुरा गरेको थियो । यसमा निर्ममतापूर्वक उभिनु पर्छ । जुन कुरा उठायो त्यो कार्यन्वयन गराऔं जस्तो सुकै चुनौती आएपनि लागु गर्नुपर्छ ।
जुम्लामा अनसन बसेका गोविन्द केसीलाई त्यही कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालन गरेर त्यसको जिम्मा गोविन्द केसीलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने हो । उनका समर्थकहरुलाई पनि त्यहीं काम गर्न पठाउनु पर्ने हो । यो सरकार किन गरिरहेको छैन । जुस खाएर उठेर त्यही प्रतिष्ठानको चिफ हुनुहोस् भन्नुपर्छ ।
गोविन्द केसी कम्युनिस्ट सरकारका विरुद्ध अझ शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता महत्वपूर्ण कुराको लागि अनसन बस्दा समाजवाद ल्याउने पार्टीको लागि लाजको कुरा होइन ?
मर्ने बेलाको आस परालको तान्द्रो भने जस्तो भएको छ । यो सरकारले कति शिक्षण संस्था खोल्ने, कति डाक्टर बनाउने, कति इन्जिनियर बनाउने भन्ने नीति सरकारले बनाउने हो । सरकारले आफ्ना प्राथमिकता आफैं निर्धारण गर्ने हो । नीति तथा कार्यक्रममा सबै कुरा आएको छ । सात वटै प्रदेशमा अस्पताल बनाउने भनेको छ । हरेक स्थानीय तहमा १५ बेडको अस्पताल बनाउने भनेको छ । यसको लागि चाहिने जनशक्ति पनि त सरकार बनाउला नि ।
सरकारको लागि गोविन्द केसीका मागहरु गौण हो । ०६४ सालको ३३ सिटे एमाले थियो भने मेरा लागि केसीका माग धेरै महत्वपूर्ण थिए । म पनि दिन दिनै आन्दोलनमा जान्थें । तर अहिले दुई तिहाइको सरकार छ । यो सरकारले विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान बनाउने कुरा हो । अनशन बस्नु र नबस्नुले केही फरक पर्दैन । आजको सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा काम गर्छ ।
तर गोविन्द केसीले आफैंलाई जोखिममा राखेर अनशन नबस्दा हुन्छ । सरकारलाई दबाब पुगेन कि भनेर भन्ने हो भने दुई दिन संसद अबरुद्ध भएको छ । दबाब पुगाउने विषय नै छैन । उहाँ भन्दा धेरै प्रगतिशील कुरा गरेर विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएका नेताहरु छांै । उहाँ भन्दा धेरै प्रगतिशील कुरा हामी संसदमा गर्छौं । कसरी कहाँ कहाँ शिक्षा स्वास्थ्य खोल्ने ? कति खोल्ने ? परीक्षा कस्तो हुने भन्ने हामीलाई राम्ररी थाहा छ ।
अब सरकारले मेरो कुरा सुनेन स्वत अनसन तोड्छु भन्नुपर्छ । सरकारले त मानिस मर्न दिँदैन । सम्झौता गर्छ । आवश्यक भए सम्झौता कार्यन्वयन गर्छ । नभए गर्दैन । वार्तामा भएका सबै सम्झौता कार्यन्वयन हुन्छन् भन्ने पनि छैन ।
अहिले शान्त पोखरीमा ढुङगा फालेको हो । प्रतिपक्षका साथीहरुलाई मसला भएको छ । ६ पटक अनसन बस्दा उहाँहरुले कति माग संम्बोधन गर्नु भयो । आज गोविन्द केसीलाई कमजोर हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दै छन् । यसले उहाँहरुलाई कुनै उर्जा प्राप्त हुँदैन । केसीको पक्षमा संसदमा उफ्रने साथीहरु हिजो आफैं मन्त्री हुनु भयो । अझ स्वास्थ्य नै । प्रधानमन्त्री उहाँहरुकै पार्टीका थिए । शिक्षा स्वास्थ्यलाई बजारको हातमा दिने उहाँहरु नै हो । आज पनि १९–२० वटा मेडिकल कलेज संचालनमा छन् । यी सबै उहाँहरुको सरकार हुँदा संम्बन्धन दिएको हो । उदारीकरण ल्याउने उहाँहरु नै हो । अहिले पनि स्वास्थ्यको व्यपार उहाँहरु सम्बध व्यक्तिहरु नै गरि राख्नु भएको छ ।
संसद अबरुद्ध गरेर के फाइदा ? कांग्रेसका कारण संसदीय समिति बनेका छैनन् । उहाँहरुले नाम दिनु भएको छैन । ४ जना सभापति हामीलाई चाहिन्छ भन्दै हुनु हुन्छ । नेपालको संविधानमा सहमतीय आधारमा हुने भनेको छैन । यदि उहाँहरुले मागेको आधारमा चल्ने हो भने किन चुनाव गर्ने ? सबै सांसद सहमतिमा बनाएको भए हुन्थ्यो नि ।
रामकुमारी झाँक्री, केन्द्रीय सदस्य, नेकपाबाट थप